Shiinaha shiidaalka mashiinka qashin qubka iyo alaab-qeybiyeyaasha | Higee
Khadka mashiinka wax lagu buuxiyo waxaa loogu talagalay buuxinta dareeraha dareeraha sare leh ama waxyaabaha sida saliida, macaanka iwm Tani waa khadka tooska ah ee buuxinta, kaas oo lagu dhex dari karo miiska quudinta, mashiinka wax buuxiya, mashiinka wax lagu xiro, taariikhda daabacan, mashiinka calaamadeynta oo ah hal xariiq oo dhameystiran.
Khadka Tooska ah ee Mashiinka Mashiinka Buuxinta
1.Mashiinka Buuxinta Saliida
Saliida, kareemka, macaanka, saabuunta, iyo waxyaabaha kale ee aadka u nuugaya ee cabitaanka, cuntada, kiimikada, sunta cayayaanka, caafimaadka, badeecada, iyo warshado kale oo badan.
Vol Qiyaasta saxda ah: Nidaamka adeegga ayaa la adeegsadaa si loo hubiyo saxnaanta sare ee mugga buuxinta.
Speed ​​Xawaare La Beddeli Karo: Xawaaraha buuxintu si otomaatig ah ayuu u gaabin doonaa markuu u dhowaado mugga loogu talagalay.
F Buuxinta Buuxinta: Dareemida buuxinta ayaa hoos u geli doonta dareeraha inta la buuxinayo si looga fogaado xumbada iyo daadashada.
Isku hagaajinta caqliga: Kaliya waxaad u baahan tahay inaad beddesho xuduudaha shaashadda taabashada ee mugga buuxinta kala duwan ama xitaa hagaajinta wanaagsan. Dhamaan madaxyada buuxiya waa la hagaajin karaa. Waxay leedahay interface user-saaxiibtinimo oo runtii waa u fududahay in la shaqeeyo.
● Wax wasakhaysan: Farsamaynta ugu weyn ee mashiinku wuxuu ka samaysan yahay bir bir ah oo aan tayo sare lahayn oo 304 ah oo leh saamayn wanaagsan oo ka-hortagga sunta jirka. Dhammaan qaybaha lala xiriirayo waxay ka samaysan yihiin bir bir ah 316L. Mashiinka oo dhan wuxuu kuxiran yahay bir bir ah iyo muraayad adag si qiiqa gaaska qashinka looga hortago.
2.Mashiinka Mashiinka Qaawan ee otomaatiga ah
Mashiinka noocan ah ee wax lagu duubo ayaa si weyn loogu isticmaalaa xiritaanka wareegyada, laba jibbaaran, ama dhalooyinka fidsan oo leh dabool.
Mashiinka Calaamadeynta warqadaha istiraatiijiga ah ee otomaatiga ah
Mashiinka noocan ah ee calaamadeynta ah ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa calaamadeynta dhalooyinka wareega oo leh istiikarada xabagta. Waxaa gacanta ku haya PLC waxaana wada servo. Isku xirnaanta isticmaale-saaxiibtinimo waxay ka dhigeysaa wax fudud in la shaqeeyo.
1. Qaab-dhismeedka wareejinta calaamadda korantada ee madaxa-bannaan wuxuu isku-dubbaridayaa geeddi-socodka rogista iyo calaamadeynta, taas oo markaa hagaajinaysa saxnaanta calaamadda.
2. Waxaa jira tilmaam ku saabsan mashiinka oo muujinaya sida filimka sumaddu u rogmato si beddelaadda filimku u fududaado.
Hore: Pasteurizer & Sterilizer
Xiga: Khadka mashiinka buuxinta saliida muhiimka ah
Mashiinka Buuxinta Shidaalka